ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်းကျင် တိုးတတ်ရန်ရည်ရွယ်လျက် လမ်းသန့်စမ်းသပ်စီမံကိန်း၏ ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းနည်းလမ်းများ | ရန်ကုန်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဤစီမံကိန်းကို ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ CESVI အီတလီ NGO၊ အီတလီနိုင်ငံ ITHACA တက္ကသိုလ်နှင့် Torino မြို့တော် တှို့မှပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။
← စီမံကိန်း၏ ဒုတိယနှစ်တွင် လူထုအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုထပ်မံဆောင်ရွက်ခြင်း
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်းကျင် တိုးတတ်ရန်ရည်ရွယ်လျက် လမ်းသန့်စမ်းသပ်စီမံကိန်း၏ ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းနည်းလမ်းများ
Posted on March 19, 2015	by swmyangon
စွန့်ပစ်အမှိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုအသင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာန၊ မြန်မာဒေသခံ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော (ECODEV) နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအသင်း တို့ပါဝင်မှုဖြင့် လမ်းသန့်ရှင်းရေး စမ်းသပ်စီမံကိန်းအတွက် ၂ရက်တာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၄ ဇွန်လ ၁၇နှင့်၁၈တွင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူ သတင်းအချက်အလတ်အားလုံး၊ အကြံပေးချက်များနှင့် ထောက်ခံချက်များကို စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာန၊ မြန်မာဒေသခံ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော (ECODEV) နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအသင်းတို့ပါဝင် အခြားသော ပါဝင်ပတ်သတ်သူများနှင့်
(က) လမ်းသန့်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အခြားစမ်းသပ်စီမံကိန်းများနှင့် အပြိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ရှိမရှိ
(ခ) ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် အောင်မြင်နိုင်သောအကောင်အထည်ဖော်မှု နည်းပျူဟာများကို သတ်မှတ်ရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်သူများသည် အောက်ပါအချက်အလတ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာနိုင်မည့်သူများကို သတ်မှတ်ခြင်း။
စီမံကိန်း၏ ဖြစ်နိုင်သော အဓိကရည်ရယ်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ မိမိဝန်းကျင်၍ ကြုံတွေ့ရသောပြသနာများကို စူစမ်းလေ့လာခြင်း၊ လမ်းသန့်နှင့် ဆက်နွယ်နေသောပြသနာများကို ခွဲခြားလေ့လာခြင်း။
ပါဝင်လာနိုင်သောသူများကို တတ်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖြစ် ပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန် ကနဦးနည်းလမ်းများ လေ့လာခြင်း။
အမျိုးမျိုးသော ကနဦးနည်းလမ်းများ (လမ်းသန့်ရှင်းခြင်း၊ နောက်ဖေးလမ်းကြားသန့်ရှင်းခြင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အဟောင်းပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခြင်း အစရှိသော)၊ အောင်မြင်မှုအများဆုံးရှိနိုင်သော ကနဦးနည်းလမ်းများကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
အောင်မြင်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခု – အားလုံးပါဝင်ရေးဆွဲထားသော ဒီဇိုင်းအကြို၊ အပြုသဘောဆောင်သော ပုံစံများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း အပေါ်အခြေခံ၍ အပျက်သဘော ဆောင်သောပုံစံများကို အပြန်အလှန် အဖြေပေးခြင်း။
ရွေးချယ်ထားသော ကနဦးနည်းလမ်းကိုအခြေခံ၍ လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်၊
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနနှင့် အခြားပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများ
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးတွင် အဖွဲ့ဖွဲ့၍ဆွေးနွေခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်လုပ်လုပ်ခြင်း၊ လှုံဆော်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ နှစ်ရက်တာသင်တန်းပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် ပါဝင်သူများက လမ်းသန့်စမ်းသပ်စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးရန် ဖြစ်နိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ရမည့်လုပ်ငန်း တွေကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။
လမ်းသန့်သည် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကို ကိုင်တွယ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းထက် စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းရဲ့ ပြသနာများအနက်မှ တိကျပြီးသီးခြားဖြစ်သော ပြသနာတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကို အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဘုရားကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းအတွင်း၊ စာသင်ကျောင်းဝန်းအတွင်း၊ လမ်းတစ်လမ်း၊ ကားမှတ်တိုင်တစ်ခု စသဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော မျြိ့တော်တွင်းကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသော နေရာတစ်ခုခုကို အခြေပြုလုပ်ဆောင်ခြင်း။
ဖွဲ့စည်းပြီးသားဖြစ်သော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ လုပ်ငန်းစဉ်များရှိသော လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အနည်းဆုံး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အကြောင်းအရာ ပမာဏအချို့ကို တိုးတတ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားသောပါဝင်သူများ၏ အဓိက လှုပ်ရှားမှုများ
ဒေသခံလူမှုရေးအဖွဲ့များသည် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများကို လမ်းသန့်စမ်းသပ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် သတ်မှတ်ထားသောအလုပ်စွမ်းအင် တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် တာဝန်ယူရခြင်း။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနသည် စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှုဘက်တွင် ကြီးကြပ်ကွက်ကဲခြင်း တာဝန်ယူရခြင်း။
ရပ်ကွက်နှင့် မြို့နယ်မှ အာဏာပိုင်များသည် အခြေခံလူတန်းစားများပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွင် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။
နိုင်ငံသားများသည် စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု အလေ့အကျင့်ကောင်းများရဲ့ အသိအမြင်နှင့်သန့်ရှင်းမှု အားဖြင့်တာဝန်ယူရခြင်း။
လမ်းသန့်သည် အပျက်သဘောဆောင်သော အပြုအမှုအများစုကိုကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားခြင်းထက် အပြုသဘောဆောင်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ပျံ့နှံ့မှုကို ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် အားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွင် တော်တော်လေး အာရုံစိုက်သင့်သည်။
လမ်းသန့်စီမံကိန်းတွင် သတ်မှတ်ဧရိယာအား အရင်ထက်ပို၍သန့်ရှင်းမှုတတ်ကြွစွာပါဝင်သော သူများအတွက် ၀င်ငွေအချို့ရခြင်း သေချာရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ရေးဆွဲသင့်သည်။
စိတ်ပါဝင်စားသော ဒေသခံလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် Cesvi သည် လိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှု အချက်အလက်အားလုံးကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုိင်ချေရှိသော စမ်းသပ်မှုအတွက် ရိုးရှင်းသော ပုံကြမ်း ရေးဆွဲခြင်း။
Cesvi နှင့် ဒေသခံလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များသည် လမ်းသန့်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် စိတ်ဝင်စားသော လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း။
ရွေးချယ်ထားသောနေရာ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း၊ ပြသနာများအခြေအနေအပေါ် အမှီပြု၍ အသေးစိတ်စမ်းသပ်စီမံကိန်း အကြံပြုချက် ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် Cesvi၊ ဒေသခံလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနက သဘောတူအတည်ပြုခြင်း။
စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးအထောက်အထားပြုခြင်းအတွက် မြို့နယ်အာဏာပိုင်များနှင့် ဆွေးနွေးပွဲကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနက စည်းရုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း။
စမ်းသပ်စီမံကိန်းကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၊ ဒေသခံလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်၏ နည်းနာအကြံပေးချက်များ၊ Cesvi ၏ကြီးကပ်ကွက်ကဲမှုအောက်တွင် ပူပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းက အကောင်အထည်ဖော်ထည်ဖော်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ChuChu ChuChu’s Facebook Page for new products, upcoming and past events!
SWM2 Facebook Check out our Facebook page for news and updates!
Website To learn more about the project, access documents in English, Myanmar and Italian, and to stay tuned with past and present project related activities in Myamnar and in Italy!